macluumaad LGBT ee qaxootiga, magangelyo-doonka iyo muhaajiriinta | USAHello | USAHello
macluumaad LGBT ee qaxootiga, magangelyo-doonka iyo muhaajiriinta
LGBT u taagan tahay lesbian, gay, labeebka iyo. In dal kasta oo bulshada, dad badan oo ka tirsan mid ka mid ah bulshooyinka kuwaas. In USA, dadka LGBT waxay leeyihiin xuquuqda iyo xorriyaadka la mid ah sida qof kasta oo kale, oo ay ku jiraan xaq u leeyihiin inay guursadaan-hawlgalayaasha oo isku jinsi ah.
Yuu yahay LGBT?
Dadka la aqoonsado oo qayb ka ah lesbian ah, gay, bisexual, ama jinsi (LGBT) bulshada ka soo jeeda kala duwan iman. LGBT ka mid ah dadka oo dhan jinsiyadaha, qowmiyadda, da ', status, iyo jinsiyadaha. Waxaa jira ku dhawaad 11 milyan oo qof oo LGBT ee USA. Tani waxay ku saabsan tahay 5% dadweynaha.
Dadka qaba hawlgalayaasha isku jinsiga ah iyo dadka ee ka dhexeeya jinsi lagu tilmaami karaa LGBT. LGBT sidoo kale ka mid ah dadka aan hubin ku saabsan jinsiga ama galmada. Dadka qaarkood beddelo ereyada ay isticmaalaan si ay isku sheega inta uu nool yahay.
xuquuqda loo siman yahay guurka
In 2015, Maxkamadda Sare ee Maraykanka (taas oo ah maxkamadda ugu sarreysa dalka) shaaca ka qaaday in guurka u dhexeeya laba qof oo isku jinsi ah waa sharci. In inta badan ee USA, xiriirka jaceyl u dhexeeya laba qof oo isku jinsi ah waxaa loo arkaa egyihiin kuwa u dhexeeya nin iyo qof dumar ah oo. In qaar ka mid ah dalalka, dadka aan dhan aqbalayaan dadka LGBT. Marka aad u safarto, bartaan waxa fikrado badan waa si aad nabad u ahaan karaan.
lesbian, gay, qeexitaan labeebka iyo
Halkan waxaa ku qoran sharaxaad of warqad kasta oo LGBT:
Qof dumar ah oo arka jacaylka ama soo jiidashada galmada naag kale sida lamaane jacayl
Inta badan loo isticmaalo in lagu qeexo nin arka jacaylka ama soo jiidashada galmada nin kale. Ereygani waxa uu mararka qaar waxaa loo isticmaalaa in lagu tilmaamo labada lamaaneeyaa Wiilal iyo Gabdho, kuwaas oo la kulmi jacaylka ama soo jiidashada galmada ah isku jinsiga ah ama lammaane isku-jinsiga.
ninkii ama naagtii arka jiidashada jaceyl iyo / ama galmo xagga labka iyo dheddigga.
T: transgender ama transexual
Qof aan garto oo la jinsi ah oo jidhka ka mid ah waxay ku dhasheen galay. Waxaa laga yaabaa in marxaladda kala guurka ah qaar ka mid ah jirka ku haboon jinsigooda. Ereygani waa ka duwan tahay kuwa kale oo dhan sababtoo ah ma aysan tixraac kuwaas oo qofka la soo jiito. Qof transgender sidoo kale noqon kartaa lesbian, tusaale ahaan.
Mararka qaarkood, laga yaabaa inaad aragto LGBT dheer la xarfaha dheeraad ah ku daray. Tusaale waxaa ah LGBTIAA. Tani waxa ay waraaqo kale oo macnaheedu.
S: Ijnsiga / suaalaha
ereygan waxa loo adeegsaday sida caay ah ee la soo dhaafay. Hadda, Waa by badan loo isticmaalo in ay ka hadlaan xaaladaha ayaga ku saabsan. Ijnsiga ah waxaa loo isticmaalaa by gay, bisexual, genderqueer, iyo transgender dadka. Waxaa loola jeedaa wax kala duwan dadka kala duwan. Guud ahaan, waxaa loola jeedaa in aad jinsiga iyo galmada waa ka duwan yahay dadka intooda badan. Ama in aad laga yaabaa in weli la ogaato sida aad dareemayso.
Tani waa erey qof oo ku dhashay iyadoo qaybo ka tirsan labada jinsiba. Waxa suuragal ah in qaybo ka mid taranka lagu qaso. Qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in lab, halka qaar kalena ay yihiin dumar ah. Waxa kale oo macnaheedu noqon karaa in hiddo ay ka tirsan yihiin labada jinsiba.
Qof ma la kulmaan jiidashada galmada. dadka Asexual taariikhda kartaa oo aad xiriir, laakiinse iyagu ma ay galmo. Tani waxay sidoo kale ka dhigan kartaa “huwanta”. Tani waa qof aan ahayn LGBT laakiin taageera xuquuqda dadka ku jira.
Ally An waa qof tilmaamaysaa sida caadiga ah (sidoo kale loo yaqaan toosan) laakiin taageertaa bulshada LGBTQIAA ah
Waxaa jira shuruuc ka hortago takoorka ka dhanka ah dadka LGBT. Takoorka waa af xanuun leh ama dabeecadda. Gobol kasta wuxuu leeyahay sharciyo u gaar ah iyo waxaa muhiim ah in ay bartaan sharciyada ee magaalada ama degmada aad.
Waxaa jira goobo badan oo loogu talagalay dadka LGBT halka aad ka heli kartaa taageero iyo samaynaysaa saaxiibo. magaalada kastaa wuxuu leeyahay kooxaha kala duwan, xarumaha, xisbiyada, iyo xitaa ganacsatada LGBT. xarumaha LGBT leedahay kheyraadka iyo abaabulo kooxo trans iyo dhacdooyinka.
June kasta, bulshada LGBT ee u dabaal guulahooda iyo taariikhda.
Waayo, dadka transgender
Si aad u hesho kooxo trans meesha aad degan tahay, waxaad isticmaali kartaa Facebook ama Google. kooxo badan ayaa on Facebook. Si aad u eegto kooxaha online, isticmaalaan erayada “trans” ama “ijnsiga sarrifka” wada iyadoo magaca magaalada ama magaalo u dhow weyn.
dadka jinsi leeyihiin qaar ka mid ah waayo-aragnimada kala duwan ka badan lesbian, gay, iyo dadka bisexual. Waxa aad war dheeraad ah oo ku saabsan dadka transgender baran karaa iyada oo Boggagaan netka.
transgender The (sidoo kale loo yaqaan trans) bulshada ayaa la eego gaar ah ay u isticmaalaan in ay ka hadlaan naftooda iyo waayo-aragnimada ay ku saabsan.
dadka jinsi waxay leeyihiin xuquuq gaar ah marka helitaanka daryeelka caafimaadka. Ka dib markii la beddelo jinsigooda, sida caadiga ah ay rabto in aad hesho aqoonsiga cusub. Tani waxaa ka mid ah laysanka wadayaasha iyo shahaadooyinka dhalashada.
mulkiilayaasha, loo shaqeeyaha iyo dadka kula shaqeeya sharci ahaan looma oggola in laga eexdo dadka trans.
beddelidda jinsiga waa hawl caafimaad oo kasta oo caawiya dadka transgender dhigma ay galmo jirka jinsigooda.
Waayo, dadka dhallinyarada ah
dadka dhallinyarada LGBT kartaan booqo TrevorSpace. Tani waxaa maamula Project Trevor ah, urur dhallinyarada LGBT. TrevorSpace waa site a lala socdo dadka dhalinta yar si ay ula xiriiraan dadka LGBT ee bulshadooda.
Resources oo loogu talagalay dadka LGBT iyo saaxiibadood iyo qoyska
PFLAG waa urur caawiya dadka qaba xubnaha qoyska LGBT fahmi dadkoodii ay jeclaayeen. On ay website, aad wax dheeraad ah ka heli kartaa ilaha waxbarashada.
MedlinePlus kale oo uu leeyahay macluumaad ku saabsan arrimaha caafimaadka LGBT.
Xarummaha Xakamaynta Cudurka leeyahay macluumaadka loogu talagalay xubnaha bulshada LGBT ee.
Halkan waxaa ah caafimaadka iyo ladnaanta guide ee bulshada LGBTQ + ka Drugwatch.com.
Addictioncampuses dalabyo caawiyo qabatinka xubnaha bulshada LGBTQ ah